Tag: suuq geynta deegaanka | Martech Zone
Tag: suuq geynta deegaanka
Ganacsiyada maxalliga ah ayaa luminaya ku dhowaad saddex-meelood meel hoggaankooda sababo la xiriira daadadka ku yimid iibkooda iyo habka suuqgeynta. Xitaa haddii ay ku guuleystaan ​​inay macaamiisha ku gaadhaan khadka tooska ah, ganacsiyada badankood ma laha degel loo dhisay inuu beddelo hoggaamiyeyaasha, ha ula socon raadadka si dhakhso ah ama joogto ah, hana garanayn mid ka mid ah ilaha suuqgeyntooda ka shaqeynaya. ReachEdge, oo ah nidaam suuq-geyn isku-dhafan oo ka socda ReachLocal, wuxuu ka caawiyaa ganacsiyada inay baabi'iyaan suuqyadan suuqyada ee qaaliga ah iyo inay macaamiil badan ku dhex wataan
Maanta waxaan ku haysannay Shane Vaughan barnaamijka raadiyaha oo ka hadlaya otomaatiga suuqgeynta maxalliga ah. Shane waa CMO ee Balihoo, shirkad bixisa adeegyo otomaatiga suuqgeynta maxalliga ah. Balihoo waa madal otomaatig suuq geyn u adeegta shirkadaha shirkadaha leh baahiyaha suuqgeynta heer maxalli ah, sida xayeysiisyada, qeybinta tafaariiqda, ama shirkadaha adeegga maxalliga ah. Tusaalooyinka waa sida 1800Doctors.com, Geico, MattressFirm in la magacaabo wax yar. Balihoo waa adeeg bixiyaha koowaad ee tiknoolajiyada is-gaarsiinta suuqgeynta maxalliga ah iyo adeegyada loogu talagalay noocyada qaranka
Wednesday, May 30, 2012 Sunday, May 27, 2012 Adam Yar
Rocketfuel waxay soo saartay macluumaadkan oo leh faahfaahin qaar oo ku saabsan moobiilka, bulshada iyo dhaqanka maxalliga ah. Isgoysyada suuq-geynta bulshada, maxalliga ah, iyo moobiilku waxay ka dhigan tahay fursad hore oo aan wali laga faa'iideysan oo loogu talagalay suuqleyda Si macno looga yeesho muuqaalka SoLoMo, waxaan soo saarnay SoLoMo infographic oo isku daraya cilmi baarista ugu badan ee warshadaha leh baaritaankayaga asaasiga ah si aan ula wadaagno waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato seddexdan qaybood ee had iyo jeer is dul saaran ee saameynta macaamiisha.